Lọ ọrụ Nchekwa Nchekwa, Ndị Na - eweta - Nchekwa Nchekwa China
Nkọwapụta A48Y-P54 3.82V, A48Y-10, A48Y-10, A48Y-P54 3.82V, A48Y-20, A48Y-P54 5.29V, A48Y-20, A48Y-P54 5.29V, A48Y-20, A48Y-P5 A48Y-20, A48Y-P54 10V A48Y-C ụdị ọdabara ọnọdụ okpomọkụ dị obere karịa 425ºC; Dị A48Y-V dabara adaba maka akụrụngwa na-echebe nrụgide karịrị akarị; ha na-arụ ọrụ okpomọkụ bụ 550 ºC ma ọ bụ obere. Dị ka ji esi mmiri ọkụ eji na PowerStation, mgbali ọzụzụ, mgbali mbenata na okpomọkụ mbenata igwe.
Akwa tmperaure na nrụgide nchekwa nchekwa dị elu
Nkọwapụta A48Y-16C, A48Y-40, A48Y-64, A48sB-64, A48Y-100, A48sB-100, A48Y-160, A48sB-160 A48Y-16I, A48Y-40I, A48Y-64I, A48sB-64, A48 100I, A48sB-100I, A48sB-160I A48Y-16V, A48Y-40V, A48SH-40, A48Y-64V, A48sB-64V, A48Y-100V, A48sB-100V, A48TH-100, A48sB-160V nchekwa nchekwa ndị a bụ akụrụngwa na pipeline nke uzuoku, wdg. ihe ihe na-arụ ọrụ okpomọkụ na C Type bụ ihe na-erughị 425C na m pịnyere bụ ihe na-erughị 500 Celsius C na V Type bụ ihe na-erughị 550C. Were maka e ...
Main nchekwa valvụ
Nkọwapụta A na-eji valvụ a maka ndị na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ, ihe nrụgide, nrụgide na igwe na-ebelata ngwaọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ na-egbochi igbochi nrụgide karịrị akarị ikike nrụgide enyere ma hụ na nchekwa nke ngwaọrụ ahụ mgbe ọ na-arụ ọrụ. Nkọwa okwu nhazi 1 、 Mgbe nrụgide na-ajụ ịrị elu na nrụgide a setịpụrụ, valvụ nchekwa ebumnuche mepere, na onye na-ajụ ihe na-eme ka ọ banye n'ime ụlọ piston nke nchekwa nchekwa isi ...
Single-menjuobi nchekwa valvụ
Nkọwa GA41H-16C, GA41H-25C, GA41H-40C A51H-16C, A51H-25C, A51H-40C GA41H, A51H ụdị nchekwa valvụ dị maka igwe eji esi mmiri ọkụ na ihe nrụgide (Igwe ọrụ na-arụ ọrụ bụ 450 Celsius C ma ọ bụ obere.), nke ga - ezere oke nrụgide gafere oke elu ekwere. Onye na-ajụ ihe nwere ike ịbụ uzuoku ma ọ bụ ikuku. Nkọwa nke ihe maka akụkụ ndị bụ isi GA41H, A51H ụdị nchekwa nchekwa, belụsọ mpempe (ihe bụ carbon steel), hama (ihe eji eme ihe bụ iron), akụrụngwa nke akụkụ ndị ọzọ ...
Mpempe nchekwa nchekwa abụọ
Nkọwa GA44H-16C, GA44H-25C, GA44H-40C, GA44H-64C GA44H ụdị nchekwa nchekwa dị na njikwa ọkụ na ọdụ nrụgide (Igwe ọrụ na-arụ ọrụ bụ 450 Celsius C ma ọ bụ obere.) Nke ga-ezere nrụgide ọnụego gafere ikike kwere n’elu. Onye na-ajụ ihe nwere ike ịbụ uzuoku ma ọ bụ ikuku. Nkọwa nke ihe maka akụkụ ndị bụ isi Maka akụrụngwa nke akụkụ nchekwa GA44H nchekwa nchekwa dị ka GA42H- 16C / 25/40 nchekwa nchekwa nchekwa.
Liquid-nsogbu nchekwa valvụ
Nkọwa 1. Ihe nchekwa nchekwa mmiri nke mmiri na-arụ ọrụ bụ ihe enyemaka nke valvụ na-eku ume (na-akpụ akpụ diski), nrụgide na-arụ ọrụ nke ọchịchọ na ngwụcha dị elu karịa valvụ iku ume (ụdị diski na-agagharị), dịka otu oge ume iku ume anaghị arụ ọrụ n'oge oyi, diski na-agagharị ga-ajụ oyi, a ga-agbaji akara mmiri mmiri nke nchekwa nchekwa ụdị mmiri maka ichebe tank mmanụ. 2.Liquid-pressure nchekwa valvụ ga-arụnyere n'elu mmanụ tank na ...
Nekọtakọta ọnụ nchekwa valvụ
Nkọwapụta ANA42F ANA42F imekọtakwa nchekwa nchekwa ga-etinye ya na mmanụ ụgbọ ala gas na ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala ma ọ bụ ala mmiri gas, iji nye nchebe nchebe.
Agụụ-adịghị mma- nsogbu nchekwa valvụ
Nkọwapụta A72W-10P, A72W-10R A72W na-emetụta na sistemụ nrụgide na-adịghị mma na ọnọdụ okpomọkụ ≤200 ℃. Mgbe nrụgide na-adịghị mma na akpa ahụ gafere uru a kwadoro, valvụ ahụ ga-emepe na-akpaghị aka ma banye ikuku. Mgbe nrụgide na-adịghị mma n'ime akpa ahụ ruru uru a kwadoro, valvụ ahụ ga-emechi akpaghị aka iji chebe akụrụngwa na usoro ahụ. Ekwesiri itinye ya na sistemụ nrụgide na-abụghị nke ọjọọ. Mgbe valvụ ọkụ nke nwere ...
Nkọwapụta A61H-160C, A61Y-320C A61Y-160P, A61Y-320P A61H / Y- 160, A61H / Y-320 ụdị eji maka akụrụngwa na pipeline nke ikuku, amonia, mmanụ gas wdg. Ihe ihe arụ ọrụ okpomọkụ dị ihe na-erughị 200 ℃, A61Y-160P ， A61Y-320P a na-eji maka akụrụngwa na pipeline nke ogo ya na corrode gas na mmiri mmiri ihe arụ ọrụ okpomọkụ erughị 200 Celsius. Were maka ngwaọrụ nchebe ọzọ.
Air Compressor nchekwa valvụ
Nkọwapụta The valvụ nke ikuku ihe na-arụ ọrụ okpomọkụ bụ ihe na-erughị 200 ℃ ， bụ ikuku compressor specificity nchekwa valvụ mgbe nsogbu nke akụrụngwa karịrị ikike kwere, valvụ ga-agbanye na-akpaghị aka na-agbapụta nsogbu kpamkpam. Mgbe nrụgide ahụ na-ebelata na ọnụahịa ekwupụtara. The valvụ ga-ngwa ngwa gbanyụọ na-akpaghị aka, iji mee ka akụrụngwa na-agba ọsọ nke ọma.
-Dị mmiri na-ebu mmiri jupụtara na valvụ nchekwa nchekwa
Nkọwapụta A48Y-16C, A48Y-25C, A48Y-40C, A48Y-64C, A48Y-100 A44Y-16C, A44Y-25C, A44Y-40C, A44Y-64C, A44Y-100 A44Y-16P, A44Y-25P 40, 4 , A44Y-64P, A44Y-100P A44Y-16R, A44Y-25R, A44Y-40R, A44Y-64R, A44Y-100R A48Y ụdị eji maka akụrụngwa na pipeline nke nwere uzuoku na ikuku wdg. Ihe ihe arụ ọrụ okpomọkụ dị erughị 350 Celsius.A44Y ụdị na-eji maka akụrụngwa na pipeline nke na ikuku na mmanụ ala na-ajụ ihe na-arụ ọrụ okpomọkụ na-erughị nke ...
Mmiri na-eburu ụdị mbuli elu dị elu na valvụ nchekwa nchekwa
Nkọwapụta A47H-16C, A47H-25C, A47H-40C A47Y-64C, A47H-64C A47Y-100C, A47H-100C A na-eji valvụ nchekwa a maka akụrụngwa na pipeline nke uzuoku, ikuku na ihe ndị ọzọ ihe ọrụ okpomọkụ anaghị arụ ọrụ karịa 350 Celsius C. Were maka ngwaọrụ nchedo nrụgide. Flange ejikọta akụkụ nke soro ọkọlọtọ usoro otu nke JB / T-94.